Galaxy Fold ကိုစက်တင်ဘာလတွင်စတင်လွှင့်တင်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
Eder Esteban | | မိုဘိုင်း
Galaxy Fold ကိုဖေဖော်ဝါရီလတွင်တရားဝင်ပြသခဲ့သည် ဒီတူညီတဲ့နှစ်၏။ ထို့ကြောင့် Samsung သည်ဈေးကွက်တွင်ပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည် လှန်ဖုန်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခွာ၌တည်၏။ ဒီကုမ္ပဏီဟာဒီစျေးကွက်ကဏ္segmentမှာရည်ညွှန်းကိုးကားလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာကြောင့်ဒီပစ်လွှတ်မှုဟာအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပစ္စည်းကိုAprilပြီလ၊ marketsပြီလကုန်မှာတချို့စျေးကွက်တွေနဲ့မေလမှာစတင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ စတိုးဆိုင်များတွင်စတင်မိတ်ဆက်မည့်ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မထွက်ခင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာ ဒီ Galaxy Fold အတွက်အရာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွဲနေတယ်.
1 Galaxy Fold လွှတ်တင်မှုဖျက်သိမ်း
3 Galaxy Fold ကိုဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ထားလဲ။
Galaxy Fold လွှတ်တင်မှုဖျက်သိမ်း
Samsung ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ဂျာနယ်လစ်အတော်များများထံသို့ Galaxy Fold ကိုယူဆောင်လာသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေ။ အယူအဆကတော့ဖုန်းကိုစမ်းသပ်ပြီးအဲဒီအကြောင်းရေးလို့ရမယ်။ ဤစမ်းသပ်မှုများတွင်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပြwithနာများတွေ့ရှိရသဖြင့်အရာရာမှားယွင်းသွားသည်။ အထူးသဖြင့်ဖုန်း၏ screen saver ။ အချို့လူများက၎င်းကိုဖန်သားပြင်အပြည့်အ ၀ မဖုံးလွှမ်းနိုင်သဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပြီး၎င်းအားဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားစေသည် မျက်နှာပြင်နှင့်အတူပြproblemsနာများဖြစ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် Galaxy Fold ၏ဖန်သားပြင်သည်တုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ဆီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပတ္တာwithရိယာနှင့်လည်းသံသယဖြစ်စရာများလွန်း။ ဝေးကွာလွန်း။ ဖုန်များအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဖုန်းတွင်ရှိသောဤပြfailနာများကြောင့် Samsung သည် Samsung ၏ထုတ်လွှတ်မှုကိုပယ်ဖျက်ပြီးအချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤကြေညာချက်အပြီးတွင် Samsung သည်ဖုန်းကိုပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖုန်းကိုဖွင့်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသောကြောင့်အမှားတစ်ခုပြုလုပ်မိကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများရှိကြောင်းကိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သိရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းကိုစတင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်မရှိသေးဟုများသောအားဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအပတ်အထိ သူတို့ကစက်တင်ဘာလအတွက်စျေးကွက်ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုသောအခါ.
ယခုအပတ်တွင် Samsung ကကြေငြာခဲ့သည် Galaxy Fold ကိုစက်တင်ဘာလတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရက်စွဲတွေမရှိသေးဘူး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပစ်လွှတ်မလားဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာချဲ့ထွင်ခြင်းမပြုမီစျေးကွက်အနည်းငယ်မှာပထမဆုံးဖြန့်ချိမလားဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ ဒုတိယရွေးချယ်စရာမှာယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရပြီးယခုအပတ်တွင်ကောလဟာလများထွက်ပေါ်နေသည်။
ကုမ္ပဏီ ပြီးသားလိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ဖုန်းပြောနေ။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အခုတော့စတိုးဆိုင်များမှာစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ အဲဒါကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အမြင့်ဆုံးပစ်လွှတ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မတ်လတွင် Samsung ၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ကာလရှိခဲ့သည်။ ဖုန်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည့်အခါ၎င်းကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသူအားလုံးထံသို့ငွေပြန်ပေးသည်။
မေးခွန်းမှာစားသုံးသူများဆက်လက်ရှိနေသေးမလား Galaxy Fold ကိုဝယ်ချင်တယ်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အပြောင်းအလဲများကိုကျွန်ုပ်တို့အားချန်ထားခဲ့သည်။ ဤလများအတွင်းသူ၏ပုံရိပ်သည်ဤလများအတွင်းအနည်းငယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ လူများစွာကဤဖုန်းကိုသံသယဖြင့်ကြည့်နေကြသည်။
Galaxy Fold ကိုဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ထားလဲ။
ဒီလများဒါကြောင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါပြီ Samsung ကဖုန်းကိုပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခုကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ screen saver ကိုရည်ညွှန်းတယ်။ ၎င်းသည်ကိရိယာ၏ကြီးမားသောပြproblemsနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်မှု၏အစွန်းများကို Galaxy Fold ၏ကိုယ်ထည်အောက်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ဒီကိစ္စမှာအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားရန်, Samsung ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးပိုမိုမြင်သာသောသတိပေးချက်များကိုလည်းထုတ်ပြန်သည်။ ဒါကြောင့်၎င်းရဲ့သေတ္တာနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထဲမှာလူတွေကိုဖုန်းမှဒီအကာအကွယ်ပလပ်စတစ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်အောင်ရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်စက်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြtheနာတွေကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်းပေါ်ရှိအခြားကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ပတ္တာ၏ထိပ်နှင့်အောက်ခြေအကြားကွာဟချက်ကိုလျှော့ချ။ ပထမစမ်းသပ်မှုများအရ၎င်းသည်ဖုန်မှုန့်များစွာကိုဖုန်းထဲသို့မျက်နှာပြင်အောက်၌သာအလွယ်တကူခိုးယူသွားခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည့်အလားအလာရှိကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒီတော့ဖုန်းကဖုန်မှုန့်နည်းသွားအောင်လုပ်သင့်တယ်။ ကြောင့်ဖုန်များစုဆောင်းခြင်းကြောင့်ခေါက်သည့်အခါဖြစ်နိုင်သောပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်အပြင်။
ကုမ္ပဏီကထပ်မံအတည်ပြုသည် အသစ်သောအကာအကွယ်ထုပ်နှင့်အတူအားဖြည့်ပတ္ နှင့်ဤ Galaxy Fold ၏မျက်နှာပြင်အောက်တွင်သတ္တုအလွှာထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်၏တင်းကျပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခေါက်သောအခါပြproblemsနာများမဖြစ်စေရပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံအတွက် application များတွင်တိုးတက်မှုများရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Galaxy Fold ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ဖြန့်ချိမည်
သြဂုတ်လမှာ Netflix, Movistar + နဲ့ HBO တွေမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲ